अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव : कमलालाई उपराष्ट्रपति पदको उम्मेद्वार बनाउनुको कारण के हो ? - सिम्रिक खबर
अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव : कमलालाई उपराष्ट्रपति पदको उम्मेद्वार बनाउनुको कारण के हो ?
काठमाण्डौ । कोेरोना भाइरसको महामारीको पीडाको बाबजुत पनि अमेरीकामा राष्ट्रपति चुनावको सरगर्मी चलिरहेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा धेरै दिनदेखि डेमोक्र्याटिक पार्टीका उम्मेद्वार, उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वारको बारेमा धेरै अनुमानहरू भइरहेको थियो।
क्यालिफोर्नियाका सांसद कमला ह्यारिस जमैकन र भारतीय मूलका पहिलो अमेरिकी महिला हुन् जसले ठूलो राजनीतिक दलबाट यस पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने छन। उनी जो बाइडेन की सहयोगी पनि मानिन्छिन् ।
बाइडेनले पहिल्यै आश्वासन दिएका थिए कि उपराष्ट्रपति पदमा केवल एक महिलालाई उम्मेदवारी दिइनेछ। हाल राष्ट्रपतिमा बाइडेनले उम्मेद्वारी दिने पक्कापक्की भएको छ ।
यो कोरोना महामारीको कारण अमेरिकाको लागि असाधारण समय हो। यहाँ कोरोना संक्रमणको कारण एक लाख ६४ हजार भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ भने लाखौं बेरोजगार भए का छन् र अर्थतन्त्र पनि खराब अवस्थामा छ।
तर कमला ह्यारिस किन सुसन राइस, करेन बास वा अरू कसैको सट्टा पदका लागि छानिइन् ?
अमेरिकामा छलफलमा रहेका कारणहरू :
जो बाइडेनले आफ्नो निर्वाचन अभियान सम्बन्धी मेलमा भनेका थिए, ‘म चतुर, कडा मेहनत गर्ने र नेतृत्वको लागि तयार भएको कोही चाहन्छु। कमला एक व्यक्तित्व हुन्।’
कमला ह्यारिससँग सबै गुणहरू छन् जुन चुनावमा पार्टीलाई फाइदा पुर्याउन सक्छ। उनी एक आप्रवासी परिवारसँग सम्बन्धित छिन्, अश्वेत महिला हुन्, उनको राष्ट्रिय पहिचान छ, उनीसँग ठूलो राज्य र देशमा नेतृत्व अनुभव छ र कमेन्टकर्ताको रूपमा उनी पनि उत्कृष्ट छिन्। यी सबै गुणहरु पहिलो दिन देखि उनलाई अग्रणी राख्दै छन्।
उनको नामले प्रगतिशील मतदाताहरूलाई असर गर्न सक्दछ जसले प्रवास र जातीय न्यायको बारेमा सोच्दछन्।
ह्यारिस कानून स्कूलबाट स्नातक छन् र उनले सान फ्रान्सिस्को शहरमा अधिवक्ताको रूपमा पनि काम गरिसकेकीछन्। त्यसपछि उनी क्यालिफोर्नियाको अटर्नी जनरल बनिन् ।
उहाँनी एक स्पष्ट, क्यारिज्म्याटिक र उग्र बहस र प्रश्नकर्ता हुन जसले धेरै छोटो समयमै सेनेटमा राष्ट्रिय पहिचान सिर्जना गरीन् ।
२। एक समय थियो जब बिडेनको अभियानले खासै राम्रो गरीरहेको थिएन र यस्तो देखिन्थ्यो कि वातावरण बर्नी स्यान्डरको पक्षमा थियो। तर फेब्रुअरी २९ मा, बिडेनले दक्षिण क्यारोलिनामा अफ्रिकी अमेरिकीहरूको मतका कारण ठूलो जीत जितेर वातावरण परिवर्तन भयो।
बिडेनले क्रमिक राज्यहरूमा अफ्रिकी अमेरिकी समुदायबाट समर्थन प्राप्त गरे र अन्ततस् बार्नीले प्रजातान्त्रिक समूहलाई एकतामा राख्नका लागि आफ्नो नाम फिर्ता लिनुपर्यो।
समुदायको त्यस्तो समर्थनका साथ छलफल सुरु भयो कि बिडेन र पार्टीले उपराष्ट्रपति पदका लागि एक नेता छनौट गर्नु पर्छ जुन यस समुदायबाट आएको छ।
उच्च प्रोफाइल अफ्रिकी(अमेरिकी नेता जेम्स क्लाइबर्नले बिडेनलाई उपराष्ट्रपति पदको लागि अश्वेत महिला छनौट गर्न आग्रह गरे।
पुलिसको हातमा अफ्रिकी मूलका अमेरिकी नागरिक जर्ज फ्लोडको मृत्युपछि जो बिडेन र डेमोक्र्याटिक पार्टीमा दबाब बढ्यो। ुब्ल्याक लाइभ मेटरु आन्दोलन सुरु भयो। आन्दोलनकारीहरूले मौखिक प्रतिज्ञाहरूको सट्टा सुधार र कारबाहीको माग गरिरहेका थिए।
निजी पारिवारिक सम्बन्धले पनि यसमामा भूमिका निभाएको बताइएको छ। जो बिडेनले आफ्नो ईमेलमा लेखेझैं ‘मैले पहिलो पटक मेरो छोरा बोको मार्फत कमलालाई भेटे। तिनीहरू दुबै अटर्नी जनरल थिए। उनी कमला र उनको कामप्रति धेरै सम्मान गर्दछन्। त्यो निर्णय गर्नु अघि म मैले यसमा धेरै सोचविचार गरेको छु। मैले यो भन्दा अरु कसैको दृष्टिकोणलाई गम्भीरतासाथ लिएको छैन। मलाई यो अभियानमा कमला मसँगै उभिरहेकोमा गर्व छ। ‘
अफ्रिकी मूलका अमेरिकीहरूसँग १३ प्रतिशत भोट छ र धेरै राज्यहरूमा उनीहरूको भोट महत्त्वपूर्ण छ।
२०१६ को अमेरिकी चुनावमा अफ्रिकी मूलका अमेरिकीहरू ट्रम्पको तुलनामा हिलारी क्लिन्टनको पराजयको कारण कम रहेको बताइएको छ।
यद्यपि यो स्पष्ट छैन कि कमला ह्यारिस कुन हदसम्म बिडेनको अभियानलाई अघि बढाउन र अफ्रिकी अमेरिकी समुदायलाई मतदान केन्द्रमा ल्याउन सक्षम हुनेछिन् ।